Ikhabhathi enomtsalane evalelweyo eCamping Skabram
Indlu enomtsalane evalelweyo eyi-45m2. Ikhabhine ibekwe eSkabram Camping & Stugby, isiza sefama esincinci esizolileyo. Apha ungayonwabela indalo kwaye uhambe uhambo oluya ngqo kwinkampu.
I-stuga ikumgama wokuhamba we-skabram echibini apho unokuqubha, ukukrola, iphenyane okanye ukuloba iintlanzi.
Yazi nezilwanyana zasefama. Kukho iigusha, iibhokhwe, iinkukhu nemivundla. NgoMatshi silindele iAlpacas. Izilwanyana ziyathanda ukuza kuwe ukuze ufumane isilwanyana sasekhaya.
I-stuga evaliweyo inegumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela, ikhitshi kunye negumbi lokulala eli-1. Ikhitshi lixhotyiswe ngesitovu sombane, i-oveni kunye nefriji, i-cutlery, iipani kunye nezitya. Igumbi lokuhlambela lineshawa kunye nendlu yangasese. I-cottage inegumbi lokulala eli-1 kunye nebhedi ephindwe kabini (140x200) kunye nebhedi enkulu. Ehlotyeni kukho indawo yokuhlala entle emva kwe-cottage enefenitshala yegadi.
I-Skabram yiparadesi yangempela yabahambahambayo, abadlali bezemidlalo, abalobi kunye nabathandi bendalo. Ngapha koko, ehlotyeni iLanga eliPhakathi kobusuku likhanya ngokuqhubekayo kangangeenyanga ezintathu kwaye ke ngoko ungonwabela ngokupheleleyo bonke ubuhle bendalo, imini nobusuku. Amava awodwa ngokwenene!
I-Camping Skabram sisiseko esihle kakhulu kwabo bafuna ukuphuma kwaye malunga. Ukusuka kwinkampu, iindlela zokuhamba eziphawulwe ngombala zikhokelela kwihlathi elibanzi kwaye zikuthathe udlule amachibi amahle ukuya kwindawo entle yokujonga kunye neendawo zepikiniki.
Iipaki zelizwe ezinomtsalane iSarek, iPadjelanta, iMuddus kunye neStora Sjöfjället nazo zifikeleleka ngokulula kwindawo yethu yokukhempisha.
Okanye ulahle intonga yakho yokuloba kumda weLake Skabram okanye ugwebe isikhephe emanzini. Ngubani owaziyo, mhlawumbi niyakuloba isidlo sakho kunye! Ungaya kwiindawo zokuloba ezaziwayo ezifana nePärlälven kwaye ukonwabele ukuzola kunye nendalo enomtsalane.
Kukho imigodi yomlilo kwindawo yokukhempa apho unokuqhotsa iintlanzi zakho.
Sikwarentisa iirodi zokuloba kwaye sikwathengisa namaphepha-mvume okuloba kwaye njengondwendwe kwindawo yethu yokukhempisha izikhephe zokubhexa zikhululekile ukuba zisetyenziswe.
Ngeentsuku zasehlotyeni ezishushu (ezenzekayo!) Unokupholisa kwakhona eLake Skabram kwaye uphumle elangeni kunxweme lwethu oluncinci lwamatye.
Kodwa kwakhona ngexesha lasebusika kufanelekile ukuhlala eCamping Skabram.
Izibane zaseMantla ezinomlingo ezihamba rhoqo esibhakabhakeni phezu kweLapland ngobusuku obubandayo basebusika zinokunconywa zisuka eSkabram. Campsite yethu ibekwe kanye kwindawo encinane ejikeleze Arctic Circle apho le enchanting nto ibonakala ngokucacileyo.
Okanye khwela kwizihlangu zakho zekhephu okanye ucofe kwiskis sakho kwaye ufumane ukuzola okukhulu kunye nokuba wedwa ebusika iLapland evela kwinkampu yaseSkabram. Landela iingoma ezingapheliyo ngapha kweLake Skabram. Abathandi be-snowshoeing banokukhulula umphunga kwihlathi elikhulu elicocekileyo elikufuphi ne-Skabram.
Kwabatyibilizi bezemidlalo abanqumla ilizwe, indawo yolondolozo lwendalo iTalvatis ikwiikhilomitha ezi-3 ukusuka eSkabram. Apha uya kufumana ucelomngeni, iindlela ezilungiswe kakuhle ezikhanyisiweyo zemigama eyahlukahlukeneyo.
Yaye xa ufika ‘ekhaya’ emva kosuku olude kubanda, unokuphumla kwisauna yethu encinane, ephekwe ngamaplanga, kumda weLake Skabram.
Kodwa ngokuqinisekileyo asifanele siyilibale eminye imisebenzi yasebusika. Zinike usuku ongasoze ululibale ngokubhukisha inja yesileyi okanye ukhenketho lwekhephu, umzekelo. Oku kunokwenzeka kwindawo ekufutshane yeCamping Skabram.
Enye yeemyuziyam ezintle kakhulu eSweden inokufumaneka eJokkmok. Ibizwa ngokuba yi-Ajtte kwaye inikezelwe kwimbali kunye nenkcubeko yamaSami kunye nehlabathi leentaba laseLapland. Apha uya kufumana ibali lokuphila kunye nokusinda kwimozulu enzima kunye nokusingqongileyo.
Ngexesha lasehlotyeni unokufumana izityalo zealpine phantse kumbindi weJokkmokk. Kumakhulu ambalwa eemitha ukusuka kwimyuziyam yase-Ajtte, ecaleni komlambo obalekayo, igadi yezityalo yaseJokkmokk, iFjällträdgården, ngumtsalane wabo bonke abathanda iintyatyambo. Apha unokufunda yonke into malunga neentyatyambo ezenzeka kwilizwe leentaba laseLapland.
inja isileyi ukukhwela
Fumana ubusika iLapland kwisileyi sezinja, okanye uqhube iqela lakho le-husky kumahlathi anekhephu kunye nentlango ekhethekileyo yaseSweden. Ekuphela kwesandi osivayo kukuzola kwendalo kunye nokuntengezela okuthambileyo kwekhephu njengoko isileyiti sityibilika kwithafa elimhlophe. Ukususela kwiiyure ze-1.5 ukuya kwii-10 iintsuku zokutyelela entabeni.
Ukhenketho lwenqwelo-mafutha ekhephini
Ngaba uyasithanda isiqholo esincinci, kodwa ngaba usafuna ukuva olo xolo lukhethekileyo kunye nendalo entle? Emva koko ukhenketho ngemoto yekhephu lunokuba yinto yakho. Ngokusebenzisa ikhephu elipholileyo okanye phezu komkhenkce kunye nokwandisa isantya? Soze uwalibale la mava. Ngokuqinisekileyo, ikomityi emnandi yekofu kunye ne-cinnamon roll okanye isidlo sasemini esishushu sikwabonelelwa ngumlilo wokhuni oqhekezayo.
Kuthatha uhambo oluhle ngemoto malunga neeyure ezi-2 ukufika apha.
Ulindelwe ngamava awodwa. Ufumana inkangeleko yasebusika esemantla eSweden ngokwembono eyahluke ngokupheleleyo, eyile, ngesileyi sakho se-reindeer. I-adventure engalibalekiyo ikulindele. Emva kokwazi i-reindeer kunye nomyalelo omfutshane malunga nendlela yokuqhuba isileyi se-reindeer kunye ne-reindeer, uya kuphonononga imbonakalo entle ngendlela emangalisayo yasebusika eLapland.
Olu khenketho lolwabo bafuna ukufunda ngakumbi ngenkcubeko yamaSami.
Ngeziko e-Lávvu (intente) unokonwabela amabali ngembali kunye nenkcubeko yamaSami kwaye umamele iJoik entle, indlela yesiSami yokubalisa ibali ngomculo. Emva koko uya kungena kwi-coral ukudibana ne-reindeer enomdla kwaye ungazondla kwaye usondele kakhulu.
Ukhenketho kwi-skis yeplanga yesintu
Hamba kwiskis seplanga esiqhelekileyo ukutyhubela amahlathi anekhephu kwaye uvumele ubunyani bemihla ngemihla butyibilike. Yazi i-Swedish 'fika', kwaye upheke ikofu okanye iti emlilweni, ngelixa usonwabela ubomi bangaphandle be-arctic cwaka.
I-Skiing kunye ne-snowboarding
Malunga neyure ukusuka kwindawo esemantla yiDundret, indawo elucelomngeni yokutyibiliza ekhephini yaseGällivare. Yaye ukuba uqhuba iyure ukuya emazantsi, uya kufika kumathambeka amahle aseKåbdalis.
Sihlala ngqo kwinkampu kwaye ke kulula ukufikelela. zive ukhululekile ukusifumana okanye usitsalele umnxeba.